နောက်ဆုံးထွက် AMD CPU ဖြစ်တဲ့ Ryzen7(4700U) ASUS Zenbook 14 UM425IA-HM032T ~ The ICT.com.mm Blog
ICT.com.mm မှာ နောက်ဆုံးထွက် AMD CPU ဖြစ်တဲ့ Ryzen7(4700U) ASUS Zenbook 14 UM425IA-HM032T တွေ ဝယ်နိုင်ပါပြီ…
Display size 14″ ရှိပြီး၊ Performance ပိုင်းထဲမှာ အကြမ်းစား Ryzen7ကို Memory 16GB နဲ့ 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD ကို ပေါင်းစပ်ထားတာဆိုတော့ ကျောင်းသုံး၊ ရုံးသုံး Software တွေကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန် အသုံးပြုနိုင်ပြီပေါ့။
Window 10 လိုင်စင်နဲ့ GPU က AMD Integrated Graphics ဆိုတော့ Autocad တို့လို engineering software တွေ Run မလား? ဂိမ်းတွေ ဆော့မလား? အဆင်ပြေပြီပေါ့။ ဒီဇိုင်းပိုင်းမှာလဲ သေသပ်လှပပြီး၊ ရိုးရှင်းတဲ့ပုံစံနဲ့ Pine Grey color လေးဆိုတော့ လူကြီးလူငယ်မရွေး တည်တည်ငြိမ်ငြိမ် ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလေးထုတ်လုပ်ထားတာနော်…
Battery ပိုင်းကလဲ4Cell, 67 WH ဆိုတော့ အားမသွင်းဘဲနဲ့တောင် ၃နာရီခွဲ ၄နာရီလောက်ကတော့ အသာလေးပဲ အေးအေးဆေးဆေး Run နိုင်တယ်နော်..
2 Years Warranty နဲ့ အရည်အသွေးကောင်းတဲ့ laptop ဆိုတော့က… အကုန်မြန်တာမို့ ပစ္စည်းရှိတုန်းလေး ချက်ချင်းဝယ်၊ ချက်ချင်းကိုင်လိုက်တော့နော်…
Newer အရောင်၊ အနံ့၊ ဓာတုပစ္စည်း၊ ကြာရှည်ခံဆေးတွေ မပါဝင်ဘဲ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့ Tipco 32 Veggi and Mixed Fruit Juice
Older Xiaomi IMILAB KW66 Smart Watch Global အလုံးတွေ ဝယ်လို့ရပါပြီ